Beyond the Reach (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Thriller ကောင်းကောင်းနှစ်သက်သူတွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားလေးကို နှစ်သက်မှာပါ။ အမဲလိုက်ဖို့ ထွက်လာရင်း မတော်တဆဖြစ်လူသတ်မူ့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ? ငွေကြေးနဲ့ အရာရာကို ဖြေရှင်းနိုင်မလား ? လူကို အမဲလိုက်သလိုဖြစ်လာမဲ့ ဇာတ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ imdb 5.6 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ။